Fitaovana zezika, tsipika famokarana zezika - YiZheng
Manome vahaolana feno izahay
Zhengzhou Yizheng Milina Mavesatra Fitaovana Co., Ltd. miorina ao amin'ny valan-javaboary andrefan'i Zhengzhou, faritanin'i Henan, manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fambolena, ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny famokarana fitaovana fanodinana fako, ny zezika BB feno fitaovana, fitaovana zezika voajanahary, tsipika famokarana zezika organika fikarohana sy fampandrosoana ary famokarana fitaovana. Manana fahaiza-manao fikarohana sy fampandrosoana mafy izahay ary tanjaky ny famokarana. Mba hanomezana mpanjifa ny famolavolana lamina, ny famokarana fitaovana zezika biolojika, ny fametrahana, ny fitsapana, ny fanohanana serivisy feno iray.
Omeo ilay zavamaniry manao zezika manontolo
Manaova zezika biolojika ao an-trano
Ahoana ny fomba hanary fako? Ilaina ary tsy azo ihodivirana ny fananganana fako biolojika rehefa manao zezika ao an-trano ny ankohonana. Ny fako fanaovana zezika dia fomba iray mahomby sy ara-toekarena ihany koa amin'ny fitantanana ny fako. Misy karazany 2 ny fomba fananganana composting azo zahana amin'ny zezika biolojika vita ...
Atombohy ny tetikasa famokarana zezika biolojika
TANTARANY amin'izao fotoana izao, ny fanombohana tsipika famokarana zezika biolojika eo ambany fitarihan'ny drafi-draharaha marina dia afaka manatsara ny famatsiana zezika tsy manimba ny tantsaha, ary hita fa ny tombony azo amin'ny fampiasana zezika biolojika dia be lavitra noho ny vidin'ny famokarana zavamaniry zezika, tsy ...
Tain'ondry ho an'ny teknolojia fanaovana zezika
Betsaka ny toeram-piompiana ondry any Aostralia, Nouvelle Zélande, Amerika, Angletera, Frantsa, Kanada ary firenena maro hafa. Mazava ho azy fa mamokatra zezika ondry be dia be izy io. Izy ireo dia akora tsara ampiasaina amin'ny famokarana zezika biolojika. Fa maninona Ny kalitaon'ny tain'ondry no voalohany amin'ny fiompiana. ...
Fa maninona ny zezika akoho no mila simbaina tsara alohan'ny hampiasana azy?
Voalohany indrindra, ny zezika akoho manta dia tsy mitovy amin'ny zezika organika. Ny zezika biolojika dia manondro ny mololo, mofomamy, zezika amin'ny biby fiompy, ny sisa tavela amin'ny holatra ary ny akora hafa amin'ny alàlan'ny fanimbana, fanamasinana sy fanodinana atao zezika. Ny zezika biby dia iray amin'ny mater mat ...
Fametrahana sy fikojakojana ny Chain Plate Compost Turner
Ny turner compost plate compost dia manafaingana ny fizotran'ny fako biolojika. Mora ny miasa ary manana fahombiazana lehibe, noho izany io fitaovana fanaovana zezika io dia ampiasaina betsaka tsy amin'ny orinasa mpamokatra zezika voajanahary ihany, fa koa amin'ny zezika any amin'ny toeram-pambolena. Fanaraha-maso alohan'ny hanaovana fitsapana hazakazaka ◇ ...
AHOANA NO HANAONANA SAFIDIANANA FACTORY ORGANIC FERTILIZER
Fandinihana ireo akora zezika biolojika Noho ny zezika simika be dia be napetraka tao anatin'ny fotoana lava be dia mihena ny votoatin'ny zava-boahary ao anaty tany raha tsy misy ny fanalefahana ny zezika organika. Ny tanjona lehibe amin'ny zava-maniry zezika biolojika dia ny hamokatra zezika biolojika ...
Ahoana ny fifehezana ny kalitaon'ny zezika
Ny fifehezana ny famokarana zezika biolojika, amin'ny fampiharana, dia fifandraisan'ny toetra ara-batana sy biolojika amin'ny fizotran'ny antontam-bokatra. Amin'ny lafiny iray, ny fepetra fanaraha-maso dia mifangaro sy mifandrindra. Etsy ankilany, mifangaro mifangaro ny tadin'ny rivotra, noho ny antsitrika ...
Ahoana ny fisafidianana masinina turner compost?
Mandritra ny fizotry ny famokarana zezika biolojika ara-barotra, misy fitaovana lehibe iray izay mitana andraikitra lehibe amin'ny dingana fanamasinana fako biolojika — milina compost turner, hampahafantatra fahalalana vitsivitsy momba ny turner compost izahay, ao anatin'izany ny asany, ny karazany ary ny fomba fisafidianana a. ..
Fako biogas amin'ny vahaolana famokarana zezika
Na dia nitombo laza aza ny fiompiana akoho amam-borona nandritra ny taona maro, dia asa kely ihany izany. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nanjary orinasa matotra io, miaraka amin'ireo tanora mpandraharaha mikendry ny tombony manintona atolotra. Isan'ny akoho amam-borona ao Ove ...
AHOANA no hamokarana zezika biolojika avy amin'ny fako ara-tsakafo?
Tsy nitsaha-nitombo ny fako ara-tsakafo satria nitombo ny isan'ny mponina ary nitombo ny isan'ny tanàna. Sakafo an-tapitrisany taonina no atsipy any anaty fako erak'izao tontolo izao. Manakaiky ny 30% ny voankazo, legioma, voamaina, hena ary sakafo fonosana eran-tany no ariana isan-taona ....
Ny fitsaboana sahaza sy ny fampiasana mahomby ny zezika amin'ny biby fiompy dia mety hitondra fidiram-bola be ho an'ny ankamaroan'ny tantsaha, fa koa hanatsara ny fanavaozana ny indostrian'izy ireo manokana. Ny zezika biolojika biolojika dia karazana zezika iray miaraka amin'ny asan'ny zezika mikraoba sy f ...
Sivana fanaovana zezika fanosotra fotaka sy fotaka famolahana zezika
Ny Sucrose dia mitentina 65-70% amin'ny famokarana siramamy manerantany. Ny fizotry ny famokarana dia mila etona sy herinaratra betsaka, ary mamokatra residue maro amin'ny dingana samihafa amin'ny famokarana miaraka. Ny satan'ny famokarana Sucrose eto amin'izao tontolo izao Misy firenena zato mahery ...
Fampiasana zezika simika tsara
Ny zezika simika dia novokarina tamina syntetika avy amin'ny akora tsy simika, dia singa manome otrikaina mahavelona ho an'ny fitomboan'ny zava-maniry amin'ny fomba ara-batana na simika. Ny otrikaina zezika simika dia manankarena amin'ireo otrikaina ilaina telo ilaina amin'ny pl ...
Fanaraha-maso kalitao ny zezika voajanahary
Ny fifehezana ny famokarana zezika biolojika, amin'ny fampiharana, dia fifandraisan'ny toetra ara-batana sy biolojika amin'ny fizotry ny fananganana zezika. Amin'ny lafiny iray, ny fepetra fanaraha-maso dia mifangaro sy mifandrindra. Etsy ankilany, mifangaro mifangaro ny tadin'ny rivotra, noho ny div ...
Famerenana ny fako sisa tavela amin'ny holatra
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fivoaran'ny teknolojia fambolena holatra azo hanina, ny fanitarana tsy tapaka ny fambolena sy ny fitomboan'ny isan'ny karazan-javamaniry, ny holatra dia nanjary vola lehibe amin'ny famokarana fambolena. Ao amin'ny faritra maniry holatra dia be ny fako ...
Ahoana ny fomba hisafidianana milina fanamainana zezika
Alohan'ny hisafidianana milina fanamainana zezika dia mila manadihady mialoha ny filanao fanamainana ianao: Ireo akora ho an'ny sombiny: Inona avy ireo toetra ara-batana rehefa lena na maina? Inona ny fizarana granularity? Misy poizina, mora mirehitra, manimba na manimba? Ny fizotran'ny fangateme ...
Ataovy ao an-trano ny zezika organika anao
Rehefa zezika biolojika vita an-trano dia ilaina ny fandotoana fako biolojika. Ny composting dia fomba mahomby sy ara-toekarena fanariana fako biby fiompy Misy karazany telo ny karazana antontam-bato: mahitsy, antsasaky ny lavaka ary lavaka Karazana mahitsy Mety amin'ny hafanana avo, orana, hamandoana be, rano be ...